ဓါတ်အားခများပြန်လည်လျော့ချကောက်ခံရန် လတ်တလောတွင်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း လျှပ်စစ် စွမ်းအား၀န်ကြီးပြော ~ The ICT.com.mm Blog
ဓါတ်အားခများပြန်လည်လျော့ချကောက်ခံရန် လတ်တလောတွင်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း လျှပ်စစ် စွမ်းအား၀န်ကြီးပြော
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခများ ပြန်လည်လျော့ချကောက်ခံရန် လတ်တလောတွင် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးကပြောကြားသည် ဟုသိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် သတင်းထောက်များကမေးမြန်းခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းထောက်တစ်ဦးမေးမြန်းသည့် လျှပ်စစ်မီတာခများ ပြန်လည်လျော့ချရန်ရှိမရှိမေးခွန်းကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးက ̏ လောလောဆယ်တော့ လျှော့ကောက်ခံဖို့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နို၀င်ဘာလမှာ စကောက်မယ် ပြောသော်လည်းဒီဓါတ်အားခပေးရမှာကဒီဇင်ဘာလမှ ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်လကြိုပြီးတော့ ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခတိုးမြှင့်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ̏ လျှပ်စစ်မီတာခကိုနို၀င်ဘာ ၁ရက်ကစပြီးသတင်းစာပါအတိုင်း ပြောင်းကောက်တာ အဓိကကြောင်းရင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ကြည်.ရင်အလွန်နည်းပါတယ် ။ ယနေ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဓါတ်အားခရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သည်လည်း လုံး၀အရှုံးခံပြီးထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခကို အရှုံးကျေအောင်လို့တိုးမြှင့်တာဖြစ်တယ်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ တိုးမြှင့်တဲ့အခါမှာလည်း ပြည်သူလူထုအတွက်ကို အဓိကစဉ်းစားပြီးတိုးပါတယ်။ တစ်ယူနစ်ကနေ ၁၀၀ယူနစ်ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တောင်သူလယ်သမားလက်လုပ်လက်စား လူလတ်တန်းစားတွေဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကိုသေသေချာချာလေ့လာပြီးတော့မှ တစ်ယူနစ်ကနေ ၁၀၀ယူနစ်ကြားမှာ ရှိတဲ့လူတွေ အားလုံးအတွက်ကို ၃၅ကျပ်ထက်မတိုးပါဘူး။ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းမှာအားလုံး စစ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၁၀၀ယူနစ်အောက်မှာရှိတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ၁၀၀ယူနစ်အောက်မှာရှိတဲ့ သူတွေ အားလုံးကို ၃၅ကျပ်နဲ့ ဆက်ပြီးပြည်သူတွေ သက်သာအောင်ကောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကစက်မှု့ လုပ်ငန်းအသေးစားလုပ်ငန်းအားလုံးသည် ယူနစ်၅၀၀၀အောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အဲဒါကိုလည်း ၁၀၀ ပဲထားပြီးတကယ့်အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးမှ ကျွန်တော်တို့က၅၀၀၀ အထက်မှသာ ၁၅၀ တိုးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာသုံးသပ်ပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော်က ဓါတ်အားအများကြီး ထွက်လာမယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကျလာမှာပဲ။ ဓါတ်အားခတွေက ဓါတ်အားတွေထုတ်လုပ်လို့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ များရင်တော့ ဒီလိုပဲတက်မယ်။ အခုတက်တာက နောက်ထပ်တက်ဖို့အလားအလာမရှိပါဘူး။ ဒါကိုလည်းသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ တစ်နှစ်လောက်ကြာရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဂက်စ်တာဘိုင်တွေထွက်လာမယ်။ ရေအားတွေထွက်လာရင် ဒီဓါတ်အားခတွေက ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြေလျှော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခများကို အိမ်သုံးမီတာများအတွက် ယူနစ် ၁၀၀အထိသုံးစွဲပါက ၃၅ကျပ်နှုန်းနှင့် ယူနစ် ၁၀၀အထက် သုံးစွဲပါက ကျပ်၅၀နှုန်းအထိ နို၀င်ဘာလမှ စတင်တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Newer Android 4.4 KitKat ရဲ့ Feature အသစ်များ
Older Android 4.4 KitKat အသုံးပြုထားတဲ့ Google ရဲ့ Nexus5ကို တရား၀င် ရောင်းပြီ
4 thoughts on “ဓါတ်အားခများပြန်လည်လျော့ချကောက်ခံရန် လတ်တလောတွင်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း လျှပ်စစ် စွမ်းအား၀န်ကြီးပြော”
Wuna Aung says:
မီတာထိမ္းသိမ္း ေစာက္ေရွာက္ခကို ပါးပါးေလး ေလ်ွာ့ ပီးေတာ့မွ ငွဲ ငွဲ ငွဲ ငွဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားခ ႏႈန္းဟာ.. ႏုိင္ငံတကာနဲ႕ယွဥ္ၾကည့္ ရင္ အရမ္းနည္းပါတယ္… ပုံ..လစ ၀ံၾကီး.
ႏုိင္ငံတကာလုိ လ်ွပ္စစ္ေပးလာ ေမးခ်င္တယ္…. ႏုိင္ငံတကာလုိ လစာ..ျပည္သူေတြရလား လုိ႕ေမးခ်င္တယ္….
.ႏုိင္ငံတကာကုိ ပဲ ေျပာေျပာေနက်တယ္.. ဒီ၀ံၾကီးေတြက..